आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ साल फागुन २९ गते बुधबार – Information
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ साल फागुन २९ गते बुधबार
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।	तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्।	निस्वार्थ सेवामा आफ्नो खाली समय समर्पित गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई र तपाईंको परिवारलाई खुशी र अथाह आनन्द दिन्छ।	कामदेव तपाईंको जीवनलाई प्रेम प्रदान गर्न तपाईं तिरै आइरहेका छन्। तपाईंले आफ्नो वरिपरि के हुँदैछ भनेर सजग हुनु पर्नेछ।	तपाईंले धेरै पहिले सुरू गर्नुभएको तपाईं एउटा परियोजना पूरा गर्दा तपाईंलाई आज धेरै सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ।	आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ।	यो तपाईंका सम्पूर्ण वैवाहिक जीवनको न्यानो दिन रहेको छ।
मनोरञ्जन र आनन्दको दिन।	लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। कठिन प्रयास गर्नुहोस्, तपाईं निश्चित भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनकि आज तपाईंको दिन हो।	काममा आजको दिनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको आन्तरिक शक्तिले पनि उत्तिकै सहयोग दिनेछ।	कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ।	आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
धार्मिक र आध्यात्मिक चासोको पालना गर्ने आज पनि एउटा राम्रो दिन हो।	तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ।	मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन।	तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो!	कार्यस्थलमा दक्षता सुधार गर्न आफ्नो कौशल स्तरको सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईं आज थाहा पाउनुहुनेछ कि विवाह भगवानले नै जुराएको हो।
तपाईं पर्याप्त आराम लिइरहेको छैन भने तपाईंले अत्यन्तै थकित महसुस गर्नुहुनेछ र अतिरिक्त आराम आवश्यक हुनेछ।	आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ।	भावनात्मक आश्वासन खोज्नेहरूको सहायता गर्न आफुभन्दा ठूला मान्छे आउने छन्।	आफ्नो प्रियको।	तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन – तपाईंले तिनीहरूसँग त्यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्नु आवश्यक छ।	समस्याको शीघ्रतापूर्ण कार्य गर्ने क्षमताले तपाईंको पहिचान बनाउनेछ। केही विशेष आश्चर्य गरेर तपाईंको जीवनसाथीले तपाईंलाई नराम्रो मुडबाट छुटकारा दिलाउनेछ।
डरले तपाईंको आनन्द बिगार्न् सक्छ। तपाईंले यसलाई आफ्नै विचार र कल्पनाको उत्पादन हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। यसले स्वेच्छाको हत्या गर्नेछ – बाँच्नुको आनन्दलाई मार्दछ र तपाईंको दक्षतामा बाधा दिनेछ – यसै कारण तपाईंलाई यसले कायर बनाउनु अघि यसको बीउ नै मारिदिनुहोस्।	आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ।	आज आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु तपाईंको प्राथमिकता हुनुपर्छ।	आज कार्डमा रोमान्टिक प्रभाव बलिया छन्। तपाईंले कठिन जस्ता देखिने समस्याहरूको हल गर्न आफ्ना सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ।	आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।
आफ्नी पत्नीसँग पारिवारिक समस्या साझेदारी गर्नुहोस्। मायालु र एकअर्काको पोषण गर्ने दम्पतीको रूपमा आफूलाई पुन स्थापित गर्न र पुन: पत्ता लगाउन एकअर्काप्रति केही समय बिताउनुहोस्। तपाईंका छोराछोरीले पनि घरमा सुख र शान्ति सद्भावको तरङ्ग महसुस गर्न सकुन्। यसले तपाईंहरू दुवैलाई आफ्नो बातचीत ऐच्छिक रूपमा र स्वतन्त्रतासँग गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।	प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ।	आत्मीय स्नेहले तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। तर तपाईंले तुच्छ कुरामा आफ्नो स्वभाव गुमाउनु हुँदैन किनकि यसले मात्रै तपाईंको चासोमा हानी हुनेछ।	तपाईंका जोडीको मूड धेरै राम्रो नभए झैं लाग्दैछ, यसैले कुराहरू सही तरीकाले संचालन गर्नुहोस्।	आफ्नो काममा केन्द्रित रहनेहरूका लागि पुरस्कार र लाभ।	आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्।	कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ।
हँसिलो हुनुहोस् किनकि यो तपाईंका सबै समस्याहरूको लागि उत्तमा विष मार्ने औषघि हो।	तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्।	यो सफलता र आनन्द ल्याउने उत्तम समय हो – तपाईंको प्रयास र तपाईंका परिवारका सदस्यहरूद्वारा प्रदान गरिएको सहायताको लागि धन्यवाद।	आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक माग पूरा गर्न हरेस नखानुहोस्।	तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण फाइलहरू सबै पक्षहरूमा पूर्ण भएका छन् भन्ने निश्चित नभएसम्म आफ्नो मालिकलाई नदिनुहोस्।	आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्।	वैवाहिक जीवनले केही नराम्रो प्रभाव लिएर आउँछ; तपाईंले आज यसको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
शारीरिक पीडा र तनाउ सम्बन्धित समस्यालाई नकार्न सकिंदैन।	त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन – यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ।	आफ्ना छोराछोरीको समस्या समाधान गर्न केही समय बाहिर जानुहोस्।	यात्राले मायाप्रिती फैलाउनेछ।	तपाईंको मालिकले आज तपाईंका कामको प्रशंसा गर्न सक्छ।	आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। तपाईंको जोडीले थाहै नपाई साँच्चै शानदार केही कुरा गर्नेछन् जुन अविस्मरणीय हुनेछ।
तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन।	तपाईं यात्रा र पैसा खर्च गर्ने मुडमा हुनुहुनेछ – तर त्यसो गर्नुभयो भने तपाईं पछुताउनु हुनेछ।	आफन्त र साथीहरूबाट अप्रत्याशित उपहार र इनामहरू।	तपाईंको सधैंभरिको प्रेम आफ्नो प्रियको लागि एउटा नदी हो।	तपाईं एक दिनको बिदामा जानु हुँदैछ भने चिन्ता नगर्नुहोस् – तपाईंको अनुपस्थितिमा पनि काम सजिलै चल्नेछ। कुनै अनौठो कारणले गर्दा समस्या भएमा – तपाईं फर्केर आएपछि यसलाई सजिलै समाधान गर्नुहुनेछ।	खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ।	के तपाईंलाई वैवाहिक जीवन समझौता मात्रै हो भन्ने लाग्छ? यदि हो भने, तपाईंलाई आज थाहा लाग्नेछ कि यस्तो राम्रो कुरा कहिल्यै तपाईंको जीवनमा भएको थिएन।
मानसिक शान्तिको लागि केही दान र पुण्यको काममा आफूलाई समावेश गर्नुहोस्।	आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्।	आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। रोमान्सका लागि अवसर स्पष्ट छन् तर छोटो समयको लागि हुनेछन्।	रचनात्मक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि सफल दिन, किनकि तिनीहरूले लामो प्रतीक्षा पश्चात ख्याति र पहिचान पाउने छन्।	असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ।	तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
मनोवैज्ञानिक डरले तपाईंलाई त्रसित गराउन सक्छ। सकारात्मक सोच राख्नाले र उज्यालो पक्षतिर हेर्नाले यसबाट बच्न सकिन्छ।	अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो।	तपाईंको ज्ञान र राम्रो हास्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्।	आनन्दको लागि नयाँ सम्बन्ध बनाउन तत्पर हुनुहोस्।	तपाईंले आफ्नो काममा ध्यान राख्नुभयो भने सफलता र पहिचान तपाइँको हुनेछ।	तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ।	दिन साँच्चै रोमान्टिक हुनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग राम्रो खाना, सुगंध, आनन्द, सबै मिलाएर राम्रोसँग रमाइलो समय बिताउनु हुनेछ। एस्ट्राे एजबाट
Previous जन्ती बोकेको बस दुर्घटना, दुइको मृत्यु, १७ जना घाइते
Next निर्मला हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका यी ६ प्रहरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश